Uyilukuhla njani indoda yaseGemini ukusuka ku-A ukuya ku-Z - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Uyilukuhla njani indoda yaseGemini ukusuka ku-A ukuya ku-Z
Uyilukuhla njani indoda yaseGemini ukusuka ku-A ukuya ku-Z
Uninzi lwamadoda aseGemini ayafana xa kufikwa kumba wezothando, njengoko ekwangumbumba ofanayo. Ubuntu nobuntu obufanayo, ukuba uyazazi ezona mpawu zisisiseko zalo mqondiso weenkwenkwezi, emva koko unayo into efunekayo yokulukuhla nayiphi na kwezi ngqondi zinzulu onokuthi uhlangane nazo.
Ukuthetha ngayo, ziguquguquka kakhulu xa kufikwa kwimicimbi yothando, ubomi bezesondo, kunye nemicimbi yentliziyo. Abasoze badlale indima yeqabane elithe kratya, kwaye baya kuzama ukuqonda kangangoko.
Seduce indoda yakho yaseGemini ngezi ngcebiso ziphezulu zi-5:
Veza inyathelo lakho lokuhamba ngenyathelo ngenyathelo.
Bonisa ubuchule bakho ngezinto ezimangazayo zothando.
Musa ukumkhawulezisa ekubeni yedwa.
Uyakuthanda umfazi otyhafileyo nonesibindi.
Joyina kwiindawo zakhe zokuzonwabisa eziphumlayo.
Qhubeka ufunda, kukho okungaphezulu apha ngezantsi.
U-Chit mncokole naye ukuba angenise
I-Geminis ngomnye wabantu abanovelwano ngokweemvakalelo phaya, kwaye uya kuziva ngathi ufumene indoda egqibeleleyo, kuba aba bemi baya kuhlala bezama ukukunika igxalaba lokulila.
Baza kuhlala bekhona ngalo mzuzu, baxhase kwaye bakhuthaze amaqabane abo ukuba aqhubele phambili kwiingxaki ezithile, babe zezona zinto zilungileyo banokuba nazo, kunye nokufezekisa amaphupha abo.
Nangona kunjalo, njengoko zintsonkothe ​​kakhulu kule nkalo, zikwanokungaqiniseki, zingazinzanga, kwaye banotyekelo lokupakisha iingxowa zabo bemke ekuboneni kokuqala kwengxaki. Okanye kusenokwenzeka ukuba badikiwe. Nokuba yeyiphi na indlela, ubudlelwane obunobungozi ngokwenene, obu.
Amadoda aseGemini zizifundiswa, abafuna ulwazi, abantu abanomdla abathanda ukujonga umhlaba kwaye bafumanise ukuba yintoni kanye kanye eqhubayo.
Ngeso sizathu, baya kuhlala bejikeleza ilizwe lonke, behamba kakhulu naphi na apho baziva ngathi. Ke, ukuba kuyenzeka ukuba ukwangumoya okhululekileyo nonomdla, ke oku kunokuba ngumdlalo owenziwe ezulwini.
Yiza nje nalo mbandela, malunga nento oyibonileyo kutyelelo lwakutshanje oluya kwiiphiramidi, kwaye uyakubona amehlo abo ekhanya ngathi ngumthi weKrisimesi, ngokuthe ngcembe vula imilomo yabo i-agape kwaye bajonge kuwe uvule amehlo. Siyavuyisana nawe, ngoku ubabambile, ngoku lixesha lokwenza into yakho.
Nangona kunjalo, nokuba awuhambanga kangako, okanye awubonisi mdla kakhulu koku, oko akuthethi ukuba akusekho mathuba.
Ngokuqinisekileyo zikhona, kwaye konke okufuneka ukwenze ukubaphulaphula xa bethetha, kuba baya kuphuma emilonyeni yabo ngokungapheliyo, malunga nantoni na onokucinga ngayo.
Linda nje kancinci, khetha umxholo okhululekileyo kwaye uzame ukubakhanyisela ngolwazi lwakho. Yimeko entle yokuphumelela yokuphumelela, njengoko befumana ulwazi lokwenene ngcono kuwe.
indoda ye-virgo kunye nepesenti yokuhambelana komfazi
Kubenza babe nomdla wokwenene kumntu okwaziyo ukuthetha, kwaye unolwazi kunye nobuchule bokufikelela kwizifundo ezinzulu.
Okona kubaluleke kakhulu, ungaze uzame ukukhawulela inkululeko yendoda yeGemini yokwenza nokucinga, kuba bayayicaphukela le nto ngokusuka emazantsi eentliziyo zabo.
Bacinga ngokukhululekileyo kwaye abafuni nto yimbi ngaphandle kokuba bakwazi ukuzula-zula emhlabeni, ngokwasemzimbeni okanye ngokwasengqondweni, kwaye ukuthintela lo mnqweno kuya kukhokelela kwintlekele nakwintlekele.
Ulwalamano? Usapho? Abantwana? Ungaze ucinge ngazo zonke ezi zinto, kuba ngekhe bafune ukuya phaya nokuba unayo loo nto kwaye ungxamile.
Ke, ukuba amaqabane abo afuna ukonwaba kunye nokuphila kamnandi kunye, kufuneka babe nengqondo evulekileyo, bamkele kwaye babunyamezele ubungqongqo babo kunye nokuguquguquka.
Aba bantu bomdabu banobuchule obuninzi kunye noyilo lwabantu abafuna izinto ezintsha rhoqo. Banentiyo entle yesiqhelo kunye neeshedyuli ezimiselweyo, kanye njengokuba bedikwa lula ngabantu abangabodwa abangatshintshi.
Kananjalo, kuya kufuneka uzame ukuba ubhetyebhetye kwaye uzenzekele ngokukhawuleza. Yiza nezimvo ezintsha yonke imihla, ubaxelele ngayo, ucwangcise uhambo olutsha, wenze utshintsho oluthile endlwini, ayibalulekanga ukuba nje bayakuqaphela ukuba uneso sandi, loo ngqondo yotshintsho.
Izinto zihlala zi-homogenous kwaye ziphulukene nexabiso labo lobugcisa njengoko ixesha lihamba, ke kufuneka zitshintshwe okanye ziziswe kwangoku.
Iingcebiso zokulukuhla indoda yakho yaseGemini
Ndikunye namadoda aseGemini, kuya kufuneka ukhuphe imipu emikhulu kwaye uyidlale ngomonde nangokuzolileyo. Ke, kuya kufuneka ufunde ukuvula kakhulu, kwaye unxibelelane kakhulu nabo.
Bawathanda amaqabane abo ukuba bathethe, bathethe ngokuchanekileyo into abayicingayo, indlela abavakalelwa ngayo ngezinto ezithile, kuba abathandi ukusebenzisa intuition yabo ukufumana oko. Kananjalo, xa sithetha ngokuthetha, kufanele ukuba kucace gca ukuba amadoda aseGemini ayayithanda incoko elungileyo okanye ingxoxo-mpikiswano, eneempikiswano, izimvo ezinzima nezintsonkothileyo zokuxhasa umxholo onikiweyo.
Ke, ngaphandle kokuba uvuleke kwaye ubonise uthando ngokubanzi, kuya kufuneka uzame ukuzenza uqheleke kwaye ube bhetyebhetye kangangoko xa befuna ukuba nengxoxo ethatha iyure malunga nobume behlabathi. Kuza kubaqhuba ngokwenene amandongomane ngolindelo ukuba babona amaqabane abo onwabele oku.
Ukuhendeka kukaGemini kujika
Kukho ubuso obuninzi kwiGeminis, kwaye uninzi lwazo lubotshelelwe kwizinto abazithandayo nangazithandiyo malunga noko bakubonayo njengeqabane elifanelekileyo.
Ke ngoko, ziindidi ezingahambelaniyo, ke ungaze ucinge ukuba uza kubaqinisekisa ukuba boyise ubuchule babo bokuziqhelanisa nezinto ezithandekayo, ezinothuli, nezamasiko agcinwe ixesha elide agcinwe sisininzi sabantu.
Baya kwenza izinto ngendlela yabo, okanye akukho ndlela. Ngapha koko, ubume babo bomoya onamandla benza ukuba kube nzima ngabantu abazinzileyo nabazolile kakhulu ukuba baphile kwindawo yabo. Abo bangenakho ukuhleka amaxesha ngamaxesha, okanye banikezele ekudlaleni kwabo, kungcono bahlale kude.
Yintoni ochasene nayo
Ingayimpazamo enkulu ukujonga ukhuseleko lweemvakalelo kwindoda yaseGemini, kuba ngabantu abangazinzanga kakhulu nabanokutshintsha abanokufumana nje iidigri ezingama-180.
Endaweni yoko, funa ukuzikhulisa apha endleleni, ukuze ungabenzi bakubone njengomqobo endleleni yabo.
Nxibelelana, uthethe, wonwabe kwaye unomdla, kwaye baya kuthi, emva koko, benze ulungelelwaniso ukuze benze yonke into iwele endaweni.
Kukho, nangona kunjalo, ingxoxo malunga nokuba lo mzali uyayazi na ukuba luyintoni na uthando lokwenene, ukugweba ngobuntu babo obunomoya kunye nokuphazamiseka.
Ingxaki yokwenyani ayikho ekukhohliseni nasekwenzeni lo mthonyama abe ngumntu othanda uthando, kodwa kwinto eyenzekayo emva kwamanqanaba okuqala.
Kulungile, unganobudlelwane nentombi-yesithandwa sakho, kodwa kuya kufuneka ukhumbule ukuba akazokwaneliseka lolu luhlu lusesikweni, kwaye ukuba oko akumniki uchulumanco kunye nokuzonwabisa, uya kukhawuleza shiya indawo.
Kuza kubakho ingxaki ngonaphakade, lo mlinganiswa wakhe ungazinzanga, kodwa kukho, nangona kunjalo, imeko enye apho ezi ngcamango zithe kratya.
Ukuba iqabane linyanisekile emva kwentliziyo nomphefumlo wakhe, kuba zininzi izinto ezifanayo kunye neempawu eziqhelekileyo phakathi kwabo, amathuba okuba yinto esisigxina.
Isayina Indoda yeGemini iyakuthanda: Ukusuka kwiZenzo ukuya kwiNdlela ekuBhala ngayo
Uyitsala njani indoda yaseGemini: Iingcebiso eziPhambili zokuMenza athandane
Ubuhlobo be-gemini kunye ne-leo yobuhlobo
Uhlobo lweGemini lokuDlala ngothando: Ubuchule kunye nokuthetha
Ukuhambelana kweGemini kunye neempawu zelanga
Ukuhambelana kweGemini Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
Ukuthandana nomntu waseGemini: Ngaba unayo into eyenzayo?
Iimpawu zeNdoda yaseGemini ethandweni: Ukusuka ekunyanzelweni ukuya kukunyaniseka
I-Scorpio ngoFebruwari 2017 iHososcope yenyanga
capricorn indoda gemini ukuhambelana komfazi
loluphi uphawu lwe-zodiac ngumatshi wama-24
ukuhambelana kwendoda kunye nomhlaza kumfazi kunye nokuhambelana
Icala elimnyama lomfazi wegemini
1955 unyaka webhokhwe
Umhlaza womfazi ozelwe ngoJuni 26